Koa satria ny vaovao Coronavirus vaika ao Shina, hatramin'ny governemanta sampan-draharaha, any amin'ny olon-tsotra, dia Kingswel milina ao amin'ny faritra rehetra mandeha eo amin'ny fiainana, ambaratonga rehetra ny vondrona dia mavitrika manao zavatra mba hanao asa tsara ny areti-mifindra ny fisorohana sy ny fanaraha-maso ny asa. Na ny orinasa dia tsy ao amin'ny ...Lire la suite »
Ry Customer, Kingswel dia vonona ny handray anjara amin'ny 31th 2017 amin'ny Guangzhou.The Chinaplas ara-drariny dia avy amin'ny faha-16 ny faha-19 Mey. Ny isa dia S01 trano rantsankazo, Hall 11.1. Misaotra anareo rehetra noho ny fanohanana sy ny tsara ho an'ny Kingswel ary tsy afaka miandry ny hahita anao ao amin'ny Chinaplas. Best momba, Eric Xu Lire la suite »
Ny 2016 Chinaplas Booth Number for Kingswel milina
Post fotoana: Feb-22-2016
Ry mpanjifa sy ny namany, Kingswel milina mandeha mba handray anjara amin'ny ara-drariny 2016 Chinaplas in Shanghai. Ny trano heva vaovao isa no eto ambany. Misaotra anareo rehetra noho ny fanampiana sy ny matoky ny Kingswel milina fa toy izany nandritra ny taona maro. Tsy afaka miandry ny hahita anao amin'ny 2016 Chinaplas any Shanghai. Ao amin'io f ... Lire la suite »
Kingswel mandeha mba handray anjara amin'ny 2015 Chinaplas ao Guangzhou. Ny fampirantiana ny fotoana dia avy May 20 ny May 23 isa ny trano rantsan-kazo dia 11.1 S65. Manantena ny hahita ny Taloha sy Vaovao mpanjifa ao! Lire la suite »